‘မြန်မာ’ ဆို ဘယ်သူသိမှာလဲ? – The Blog of Aung
စာရေးသူဟာ ၁၉၈၄ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာလာပြီး၊ ဦးစွာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ လေယာဥ်ကွင်းမှာတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စစ်ဆေးခံဖို့ နိုင်ငံအသီးသီးက ဆိုက်ရောက် လာကြတဲ့ ခရီးသည်တွေနဲ့ အတူ ဝင်တန်းစီလိုက်ပါတယ်။ စီတန်းနေတဲ့ တန်းဟာ အင်မတန် ရှည်လျားတဲ့ အပြင်၊ တဖြည်းဖြည်းချင်းသာ ရှေ့ကို ရွေ့နေတဲ့ အတွက် မိမိရှေ့က စပိန် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘာသာစကားနဲ့ သူ တပြစ်တောက်တောက် လုပ်နေပါတယ်။
သူဟာ နောက်ကို လှည့်အကြည့်မှာ မိမိကို တွေ့ပြီး ထိုင်းလူမျိုး ထင်မှတ်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ထိုင်းနိုင်ငံကို မကြာခဏ ဝင်ထွက်ဖူးသူ မှတ်လို့လားတော့ မသိပါ၊ ဒီမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ တန်းစီရတတ် သလဲ? လို့ မေးတဲ့ အခါ၊ မိမိကလဲ ဒါ ပထမဆုံး အကြိမ်မို့လို့ မသိတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒီအခါ သူက စကားဆက်လို့ မိမိကို ‘ဘယ်ကလာသလဲ?’ လို့ မေးတော့၊ မိမိကလဲ ‘ဘားမား’ (ထိုအချိန်က မြန်မာကို အင်္ဂလိပ်လို ဘားမားဟု ခေါ်သည်) ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူက မျက်မှောင်ကြုတ်ပြီး ဘားမား ဆိုတာ ဘယ်နေရာကလဲ လို့ ထပ်မေးရာ၊ အခုမင်းရောက်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဖက် နယ်နိမိတ် ဆက်နေတဲ့ နိုင်ငံ ဆိုပြီး ရှင်းပြရပါတယ်။
ပထမတော့ မြန်မာပြည် ဘယ်နားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာတောင် မသိတဲ့ ဒီလူဟာ တော်တော် ညံ့တဲ့ လူဘဲလို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခဲ့စဥ် ထိုင်းလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၃ ယောက်တွေ့ရင် ၁ ယောက်မှာတော့ မြန်မာပြည်ကို မသိလို့ ဘယ်ဆီဘယ်နား ရှိတယ် ဆိုတာ ရှင်းပြရလေ့ ရှိတာကြောင့် ဒီလူတွေ မြန်မာပြည်ကို ဘာလို့ မသိကြတာလဲ ဆိုတာ နားလည်ရ ခက်မိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ကို မြန်မာတော်တော်များများ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ မြန်မာဆိုတာကို ဘယ်နားရှိတယ် သိပ်ရှင်းပြစရာ မလိုတော့ပါဖူး။ ဒါပေမဲ့ အရှေ့တောင် အာရှဖက်က ထွက်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ တစ်ခါ မြန်မာဆိုတာကို ပြန်ရှင်း ပြရပြန်ပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာနဲ့ မြန်မာကို ‘ဘီရုမာ’ လို့ ခေါ်တာကြောင့် သူတို့စကားနဲ့ ဖြေရင်လဲဘဲ အမည်ကိုတော့ သိပေမဲ့ ဘယ်ဆီဘယ်နား ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ အများအားဖြင့်မှာ ယောင်ဝါးဝါး ရှိကြပါတယ်။
အမှန်တော့ ကမ္ဘာမှာ ဝင်ဆန့်တိုးနိုင်တဲ့ အရည်အသွေး တစ်ခုခု ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာက သိနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဟိုးတချိန်က မြန်မာနိုင်ငံလောက်ပင် ထင်ရှားမှု မရှိခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုရင် သူတို့ ရိုးရာ ထိုင်းအစားအသောက်နဲ့ ဝင်တိုးနိုင်တဲ့အခါ နိုင်ငံတကာမှာ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွေဟာ အများအပြား တွေ့နိုင်သလို၊ ထိုင်းနိုင်ငံကို မသိသူလဲ ရှားကြပါတယ်။ သြစတေးလျမှာ ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံကို မရောက်ဖူးကြသူ တော်တော်များများ ရှိပေမဲ့ ထိုင်းအစားအသောက် မစားဖူးကြသူတော့ သိပ်မတွေ့ရပါဖူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ မြန်မာ ဆိုတာ ဘယ်ကလဲ မေးတဲ့လူများကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဖက် ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံကလို့ ရှင်းပြနေရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို ပြောပြရင်တော့ ယုံဖို့ ခက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အသင်းဝင် နိုင်ငံ တစ်ခုကို မသိဖူး ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုရင် ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တန်း သာမာန် နိုင်ငံသား အရပ်သား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အသင်းဝင် နိုင်ငံအားလုံးကို သိကြမှာတော့ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာ စဥ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကလဲ ဦးသန့်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာဘဲ လို့ ပြောပေမဲ့၊ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ပင် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် လုပ်ခဲ့ကြဖူးသူတွေရဲ့ နိုင်ငံတွေ ဘယ်ဆီဘယ်နားမှာ ရှိတယ် ဆိုတာ တိတိကျကျ သိကြပါရဲ့လား မေးကြည့်ရပါမယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ မိမိတို့ အနေနဲ့ မြန်မာ့ ယဥ်ကျေးမှုဟာ ကမ္ဘာကဘဲ အံ့မခန်း ဖြစ်နေရသလို၊ မြန်မာ့ သယံဇာတ ပစ္စည်းများဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ထင်ရှား ကျော်ကြားနေသလို၊ မြန်မာ့ စိတ်ဓါတ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာကဘဲ လေးစားနေကြသလို၊ မြန်မာ့မြေပုံနဲ့ သမိုင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထယ်ဝါ ခန့်ဌား နေသလို၊ အဲသလို… သလို များနဲ့ မာန်တက်နေကြတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲသည်လို မာန်တက်ခဲ့ကြပြီးသော်လည်း တကယ်တန်း တိုင်းတပါးကို ထွက်လာရင်ဖြင့် မြန်မာဆိုတာ ဘယ်ဆီဘယ်နားကလဲ ဆိုတာ မသိကြသူများနဲ့ တွေ့လာရတဲ့အခါမှာ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိအောင် ဘယ်လို ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်မယ် ဆိုတာ တွေးခေါ်ကြံဆဖို့ထက် ‘မြန်မာဆို ဘယ်သူသိမှာလဲ’ ဆိုပြီး အေးအေးလူလူသာ နေတတ်ကြတာကတော့ အင်မတန် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on February 25, 2019 February 25, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး
Previous Previous post: ကျွဲအိုင်ထဲက ဖားကလေး
Next Next post: ထူးချွန်ဆုလား? ပရိသတ်ကြိုက်ဆုလား?
ယူနီကုဒ်အပြောင်း အထူးသတိပြုစရာ (4,692)
သူတို့ဆီက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ (4,543)
စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ (2,432)
အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁) (2,374)
ဓါးပြ၊ သူခိုး၊ လူလိမ်များရဲ့ ရွာ (2,022)